CFA vs. FRM - Nke Asambodo bụ Better? [It's a Close Call!]
CFA vs FRM: Nke Asambodo bụ Better?
23 Aug CFA vs FRM: Nke Asambodo bụ Better?
Posted at 22:50h na Alternate Articles site Bryce Welker, CPA 0 Comments
Bụ CFA ma ọ bụ FRM Better maka gị Ọrụ?
Gịnị bụ a FRM?
CFA vs FRM: asambodo chọrọ
CFA vs FRM: ọrụ Ụzọ
CFA vs FRM: Asambodo Akwụ ụgwọ
CFA vs FRM: ụgwọ ọnwa
Nke a bụ otu n'ime ndị kasị ugboro ugboro jụrụ ajụjụ na ụmụ akwụkwọ ga-eme ka mgbe ị na-ekpebi ka ọganihu ha ọrụ na ego. Gị oke dị mkpa n'ihi na onye ọ bụla nke certifications na-ewe ọtụtụ ọrụ ike, ego na oge. The oke nwere ike isi ike ma ọ bụrụ na ị na-amaghị nke ya isi iche. The isi ihe dị iche n'etiti CFA na FRM certifications bụ isiokwu na-na-ekpuchi. CFA-agụnye ọtụtụ nke isiokwu na ego dị ka ụlọọrụ ego, Pọtụfoliyo management, ajụjụ, ofu ego, na nkwekọrịta. N'akụkụ aka nke ọzọ, FRM bụ a pụrụ iche na ihe ize ndụ management. Ọzọkwa, CFA akwadebe gị ọma maka ọrụ na ego ụlọ akụ, Pọtụfoliyo management, ego research. The FRM na-ruru eru maka ndị na-achọ ime ka a ọrụ n'ihe ize ndụ management na anoghi n'ulo oba, àkù ngalaba ma ọ bụ na n'ihe ize ndụ nnwale.
CFA anọchi Chartered Financial Analyst na bụ a asambodo akwụ site CFA Institute. CFAs bụ ọkachamara na ego management. Ụfọdụ na-ewu ewu ọrụ utu aha ẹkenịmde CFAs gụnyere Pọtụfoliyo manager, research nyocha, na ego onye oru banki. Ha na-agbasaghị na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ego.
FRM anọchi Financial Egwu Manager na bụ a asambodo awa site Global Association of Egwu Professionals. GARP na FRM asambodo na-mba dị. FRMs amata ihe nzukọ ize ndụ na ịzụlite azum belata ma ọ bụ ígwè na ọ. Ha nwere ike na-arụ ọrụ na ụlọ akụ, corporations, akpan owo management sịrị, na ọchịchị.
Iji ghọọ a CFA, ị ga-idebanye aha na asambodo omume awa site CFA Institute. Idebanye aha na usoro ihe omume, ị chọrọ a afọ anọ ogo ma ọ bụ Nchikota mmụta / ọrụ ahụmahụ ma na-agafe a atọ-akụkụ udomo oro ekpuchi esonụ isiokwu:
Ọ na-ewe banyere 300 awa nke ọmụmụ oge gafee ọ bụla larịị nke CFA udomo oro. Ọzọkwa, na-enweta n'akwụkwọ iwu, mkpa ka i nwere ụkwụ anọ eje ije afọ nke yiri ọrụ ahụmahụ n'okpuru a CFA. Ị ga-abụ onye so na nke CFA Institute.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịghọ a FRM, ị ga-agabiga a abụọ udomo oro ndinọ site Global Association of Egwu Professionals (GARP) ekpuchi-esonụ isiokwu:
Ebe E Si Nweta Egwu
Ọ a na-ewe FRM aga ime dịkarịa ala 150 awa na-amụ ihe ọ bụla udomo oro larịị ma GARP agba ume FRMs na- 40 awa nke nọgidere na-akụziri ọ bụla afọ abụọ. Ezie na GARP-adịghị achọ ọ bụla kpọmkwem afọ anọ ogo chọrọ ma ọ bụ nke kacha nta ọnụ ọgụgụ nke Ebe E Si Nweta awa, jide a ọrụ na n'ihe ize ndụ management ọ dị mkpa ka nwere a okokporo na. Irite ma asambodo, njikere itinye ego oge na-amụ na udomo oro nkwadebe.
Ọ na-ahụkarị na CFAs nwere ọzọ ọrụ ohere karịa FRMs n'ihi na ha sara mbara ọmụmụ na nkà, karịsịa na nlekọta ọnọdụ. CFAs ipuiche ijikwa na Ịnwetacha uru ịrụ ọrụ a siri ike nke investments, nke nwere ike igba a obosara net ọrụ nke maara ihe. CFAs a na-arụ ọrụ na oke ego, ego anoghi n'ulo oba, na ụlọ ọrụ ego na-eme ego ụlọ akụ, Pọtụfoliyo management, na hara nhatanha research. N'akụkụ aka nke ọzọ, FRMs bụ ihe ndị ọzọ pụrụ iche na-elekwasị anya tụlee ihe ize ndụ na figuring ụzọ ya iji belata ya n'ime a ụlọ ọrụ ma ọ bụ Pọtụfoliyo. FRMs a jide nlekọta na onyeisi larịị ọnọdụ onye na-etinye uche n'ihe ize ndụ na ego n'ihe ize ndụ.
The CFA udomo oro nwere a otu oge ihe omume aha ego nke $450. Mkpokọta udomo oro ụgwọ maka ọ bụla larịị a na-eri $930. CFA aga ime nwere ike na-atụ anya na-akwụ ụgwọ $1,100 ka $1,700 iji nweta ha n'akwụkwọ iwu. Iji FRM udomo oro, ị chọrọ ịkwụ ụgwọ a $400 aha ego na mgbakwunye na nke na-akwụ ụgwọ nke ọ bụla udomo oro. Part m na-akwụ ụgwọ $875 na Part II-akwụ ụgwọ $475. I nwere ike na-atụ anya na-akwụ ụgwọ $1,050 ka $1,500 na-a FRM. Pass ọnụego maka ma ule nọ 40 percent nso.
Ụgwọ ọnwa maka ihe ọ bụla ọrụ na-adabere na ọrụ aha, afọ ahụmahụ, na ebe. CFAs nwere ike irite a ụgwọ n'etiti $45,000 na $180,000 kwa afọ dabere na ọnọdụ ha, ahụmahụ, na ụlọ ọrụ. The FRM ụgwọ nso yiri nnọọ ka CFA ụgwọ nso. FRMs a irite $50,000 ka $165,000.
Ma e na-dokwara akwanyere ùgwù n'ụwa nile na abughi onye dị mma karịa ndị ọzọ. Ha bụ nanị dị iche iche. Ezie na CFA designation sara mbara n'ụwa na lekwasịrị anya kpamkpam na investments, na FRM specializes na atụle na ijikwa ihe ize ndụ nke otu nzukọ. Mkpebi gị n'etiti abụọ bụ kpam kpam dabere na ebe gị ọdịmma edina na ihe ị na-emekọ ihe. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmụtakwu banyere kacha mma CFA Prep ọmụmụ you can go here. Ọ dịghị ihe mere mere na ị gaghị nwere ma. Ọ niile na-adabere ihe ị chọrọ ime na gị ọrụ. Kacha dịruru ná njọ n'ihi na ma a CFA na FRM asambodo is if you are a CFA and would like to specialize in risk management. Cheta, na FRM designation bụ ụzọ ọzọ pụrụ iche karịa CFA. Ya mere, ọ pụrụ ịbụ na uru ka nwere ma. M ga-ikwu na anya na ihe ị chọrọ ime na gị ọrụ ma bulie otu. Mgbe ahụ, mgbe ị na-amalite gị ọrụ, i nwere ike ikpebi ma ọ bụrụ na ọ ga-abụ bara uru na-achụso onye ọzọ.
Tụlee Top FRM Ọmụmụ
Tụlee The Best CFA Coursess
Best Bar Prep Ọmụmụ